အထင်ကရအသင်းတော်နှင့်ဘုန်းအတွက်ဥရောပ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > အထင်ကရအသင်းတော်နှင့်ဘုန်းအတွက်ဥရောပ
Noravank, Vayots Dzor ပြည်နယ် (အာေမးနီးယား)
Noravank သည်သမိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အထင်ကရဘုန်းကြီးကျောင်းတို့ကိုသာ Vayots Dzor ပြည်နယ်. ဘုရားကျောင်းအားစူးရှသောအနီရောင်ကျောက်များဖြင့်ဝန်းရံထားသည်, ပြီးနောက် အံ့သြဖွယ်ရှုခင်း သည်၏တစ်ခုဖြစ်သည်အကောင်းဆုံးအကြောင်းပြချက် စူးစမ်းယား. သမိုင်း Noravank အတွက်တည်ဆောက်ခဲ့ အဆိုပါ 13ကြိမ်မြောက် ရာစုနှင့်နည်းလမ်းများ "အသစ်ဘုန်းကြီးကျောင်း" အတွက်အန်. ဘုန်းကြီးကျောင်းအလာယဉ်ကျေးမှုနှင့်ပညာရေးစင်တာအနီးယား.
Tatev ကီးေက်ာင္း, Syunik ပြည်နယ် (အာေမးနီးယား)
Tatev တ၏ရတနာအန်ဗိသုကာ. ဘုန်းကြီးကျောင်းကို ၉ ရာစုမှ ၁၃ ရာစုအတွင်းဆောက်လုပ်ခဲ့သည် ပညာရေးစင်တာ အာမေးနီးယားသမိုင်းအတွက်သမိုင်းဆိုင်ရာအရေးပါမှုရှိသည်. ၏နာမတော်ကိုဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ခုစိတ်ဝင်စားဖို့မူလ. အဲသည်အကောင်းနှင့်အ touchy ဒဏ္ဍာရီအကြောင်းခင်သူထောင်ဘုရား. သူကစိတ်အားထက်သန်မြင်ရသူ၏လက်မှအလိုရှိသည်တို့ကိုမေးပေးသနားရန်ဘုရားသခင်သူ့ကိုအတောင်တော်.
ဘုရားသခင်၏စကားကိုနားထောင်ဖို့သူဆုတောင်းပေးသူ့ကိုနှစ်လိုဖွယ်တောင်. အဆိုပါစကားလုံး "Tatev" အဖြစ်ဘာသာပြန်ထားသောဖြစ်ပါတယ် "ပေးခြင်းတို့ကို". သင်ကသွားရောက်ကြည့်ရှုတပြိုင်နက်အဆိုပါဘုန်းကြီးကျောင်းသင်ခံစားရလိမ့်မယ်အစစ်အမှန်အဓိပ္ပာယ်ကို. အဆိုပါဘုန်းကြီးကျောင်းအားလုံးနှစ်ဖက်ကနေနက်ရှိုင်းဉျကဝိုင်းနေသည်. အာမနေီဘုရားကျောင်းအာမေးနီးဘာသာတရားနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ. Armenian အဘိဓါန်ဒေသဆိုင်ရာခရီးစဉ်၏ပုရွက်ဆိတ်အမျိုးအစားကိုသင်အသက်အကြီးဆုံးတိုင်းပြည်ကိုစူးစမ်းဖို့အခွင့်အလမ်းပေးတော်မူမည်.
Sagrada Familia, ဘာစီလိုနာ (စပိန်)
Sagrada Familia အများဆုံးသွားရောက်လည်ပတ်အထင်ကရအသင်းတော်တွင်စပိန်. ဆောက်လုပ်ရေး၏အထိမ်းအဖြစ 1882. Architect Francisco de Paula del Villar was designed inaclassic Gothic style. ဒါပေမဲ့, တွင် 1883 Antoni Gaudi သည်ပရောဂျက်ကိုပြောင်းပြီးတည်ဆောက်ခဲ့သည် ခေတ်သစ်ဗိသုကာ အဲဒါကကမ္ဘာမှာနာမည်ကြီးတယ်. ဆောက်လုပ်ရေးနိုင်မည်တွင်ပြီးစီး 2026, အရာစုနှစ်၏Antoni Gaudi ရဲ့သေခြင်း.
အဆိုပါဗိသုဖို့စီစဉ်တည်ဆောက် 12 တာဝါတိုင်, အနုသည်ယေရှုခရစ်နှင့်တပည့်, ယေရှု၏မိခင်တစ် ဦး, လေးအားလုံးက. ယခု, ပြီးစီးခဲ့ပါပြီပြီးတာဝါတိုင်ရှစ်. အတွင်းအသင်းတော်, Gaudi သည်သစ်တောပုံစံကိုပြုလုပ်ထားသောသေးငယ်သောသစ်ပင်စည်များ၏ပုံစံများဖြင့်ကော်လံများကိုဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့သည်. ထိပ်ကနေဗိမာန်, သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သ အထင်အမြင်ချင်း မြို့သူမြို့သား.
Borgund ထမ်းဘိုး, Borgund (နော်ဝေ)
ထမ်းဘိုးဘုရား နော်ဝေနိုင်ငံတွင်အထင်ရှားဆုံးမှတ်တိုင်ဖြစ်သည်. ဒါဟာတည်ဆောက်အတွက် 1180 နှင့်ဆက်ကပ်အပ်နှံဖို့အဘိုးအနြေ္ဒ. ဤဘုရားကျောင်းများသည်နော်ဝေနိုင်ငံဗိသုကာလက်ရာများအတွက်အရေးကြီးဆုံးအထင်ကရအထိမ်းအမှတ်များဖြစ်သည်. အချို့၎င်း၏နူးညံ့သိမ်မွေ့သောဂုဏ်အလာႏိုင္ပါထွင်းထုမုခ်နှင့်စည်းမျဉ်းနှင့် carvings၏နဂါးရဲ့ဦးခေါင်းအပေါ် အိမ်ခေါင်မိုး. ဒီစတိုင်ခဲ့ပြန့်ပွားအတွက်အတတ်ပညာအတွက်အသုံးပြုလည်းဗြိတိန်.
ထိုဒေသသည်ကြွယ်ဝသောသမိုင်းဝင်အမွေအနှစ်များဖြင့်ဝန်းရံထားသည်. Vindhellavegen ပီးအနီးတည်ရှိသောခရစ်ယာန်အကြံပြုလွလမ်းလျှောက်ဖြစ်နိုင်ခြေ. ဤသမိုင်းဝင်လမ္း ချီးမြှင့်ခဲ့သည် "ေနာ္ေဝႏိုင္ငံရဲ့အလှဆုံးလမ်းကြောင်း" အနော်များပြည်သူလမ်းအုပ်ချုပ်ရေးအတွက် 2014.
Duomo, မီလန် (အီတလီ)
Duomo သည်မီလန်၏မြောက်ဘက်တွင်တည်ရှိသည်, ဒီအဆုံးဘုရားရှိခိုးကျောင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်အများဆုံးကြောက်မက်ဘွယ်သောနှင့်ဆွဲဆောင်မှုအဆောက်အဦကမ္ဘာထဲမှာ. သခင်နှင့်မီလန်၏ဂိုဏ်းချုပ်တစ် ဦး သည်တည်ဆောက်ရန်ဆန္ဒရှိသည် ထူးခြားသောဘုရားရှိခိုးကျောင်း ၎င်းသည်လူမျိုးအားဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်နှင့်မြို့ဆက်သွယ်မှုကိုခံစားရစေလိမ့်မည်. Duomo ဆောက်လုပ်ခြင်းသည်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်သက်ဆိုင်သည်, ္, ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေနှံ့ကနေဥရောပ. အသီးအသီးအလုပ်သမားတွေရဲ့အတွေ့အကြုံနှင့်လုံ့ကူညီဖန်တီးရန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနယ် Duomo.
ဤသည်အားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာအမြင့်သဘင် အပြင်အဆင်. အနှံ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကျော် 3400 ရုပ်, 135 gargoyles, နှင့် 700 စကျင်ကျောက် ကိန်းဂဏန်းများကိုလက္ခဏာသောအ Duomo. မှ အမြင့်ဆုံးအထွတ်အထိပ်, နိုင်ပါသည်ဘယ်မှာတက်လှေသို့မဟုတ်အယူကိုဓာတ်လှေကား, သင်မြင်ရလိမ့်မည်အချော Madonnia, ရွှေကိုယ်စားပြုထု၏မာရိနှင့်အပေါ်ရှင်းလင်းရက်ပျော်မွေ့နိုင် ရင္သပ္ရႈေအမြင်ချင်း မီလန်၏.
Hallgrimskirkja, ကျယာဗစျ (အိုက်စလန်)
Hallgrimskirkja ဘုရားကျောင်း Reykjavik ရှိအမြင့်ဆုံးနှင့်အကြီးဆုံးအဆောက်အအုံဖြစ်ပြီးတစ်မြို့လုံးတွင်မြင်နိုင်သည်. အသင်းတော်ရှိ 74,5 မီတာ ႏွင့္ ခရီးသွားဧည့် နိုင်ဝင်အသင်းတော်ကိုခံစားခြင်းအထိမ်းအမြင်. အဆောက်အဦရဲ့ဆောက်လုပ်ရေးစတင်ရန်အတွက် 1945 ၌ပြီးစီးခဲ့သည် 1986. modernist ဘုရားကျောင်းသည်ချော်ရည်များကျောက်ထဲသို့အေးသွားသောအခါ basalt lava စီးဆင်းပုံနှင့်ဆင်တူသည်.
လမ်းကြောင်းတွေအဝေးမှထံမှလေးလက်စွဲနှင့်စက်ဘီးနင်း. ရှိပါတယ် 102 ရာထူး, 72 ရပ်တန့်, နှင့် 5275 ပိုက်ပြီး 15 မီတာ အရပ်ရှည်ရှည်, အလေးချိန် 25 တန်ချိန်. အဆိုပါအဆောက်အစွမ်းထက်နိုင်စွမ်းနှင့်ဖြည့်စွက်၏သန့်ရှင်းသောနှင့်ကြီးမားသောအာကာသ. ေဆာက္လုပ္ေရးကလီစာတွေကို၏အကြီးအချောအတွက် 1992 သုံးပြုခဲ့သည်အမျိုးမျိုးများအတွက်အသံသွင်း.
သင်အဆင်သင့်ကြည့်ရှုရန်အချို့သောအထင်ကရအသင်းတော်နှင့်ဘုန်းအတွက်ဥရောပ? သင်ရနိုင်ဖို့အားလုံး၏ဤခရီးကိုအလွယ်တကူနှင့်အတူ၏အကူအညီ တစ်ဦးကရထား Save ! အဘယ်သူမျှမဝှက်ထားသောအပိုဝန်ဆောင်ခနှင့်အတူ, သငျသညျကြောက်မက်ဘွယ်စီးနှင့်ကောင်းမွန်သောကြိမ်ပေါ်သုံးဖြုန်းဖို့ပိုရှိသည်လိမ့်မယ်!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ, သို့မဟုတ်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ficonic-churches-and-monasteries-in-europe%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#အသင်းတော်များ #ဘုန်းကြီးကျောင်းများ europetravel ခရီးသွား
ကျွန်မခရီးသွားဘလော့ဂါများနှင့်လည်းခရီးသွားအေးဂျင့်ဖွစျပါ၏. ငါစွန့်စားမှုအဘို့အခရီးသွားလာနှင့်ဤအံ့သြဖွယ်ကမ္ဘာကြီးကိုစူးစမ်းဖို့ကိုချစ် - သငျသညျဒီမှာနှိပ်ပါနိုင်ပါတယ် ငါ့ကိုဆက်သွယ်ပါ
ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ရထားခရီးသွားတရုတ်, ရထားခရီးသွားချက်သမ္မတနိုင်ငံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားဟော်လန်, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ဥရောပခရီးသွား